Mpanamboatra sy mpamatsy paompy mitsangana mitsangana | KAIQUAN
Mikoriana: 10-4500m3 / h
Loha: Hatramin'ny 54m 3. Suhu misy ranoka ＜ 80ºC ，
Sarobidy PH: 5 ~ 9
Ny haavon'ny rano dia tsy tokony ho ambany noho ny: Marika «▽» aseho amin'ny kisary refy fametrahana.
Tsy azo ampiasaina ny paompy hifehezana ilay ranoka amin'ny harafesina matanjaka na poti matevina .:
Ny savaivon'ny tsiranoka ao anaty ranoka dia tsy mihoatra ny 80% amin'ny haben'ny fantsona fantsona farany ambany amin'ny paompy: Ny halavan'ny alim-by dia tokony ho kely kokoa noho ny savaivony fanatontosana paompy.
WL (7.5kw-) Series Pump Vertical Sewage CN
Tombony azo avy amin'ny rano maloto:
1. Ny tsy manam-paharoa designe ny roa-fantsona impeller, malalaka paompy vatana, mora mandalo zavatra mafy, ny fibre dia tsy mora entiting, mety indrindra ho an'ny fitaterana ny maloto.
2. Ny efitrano famehezana dia mandray ny volavolam-baravarankely, izay afaka misoroka ny loto ao anaty maloto tsy hiditra amin'ny tombo-kasen'ilay masinina; Mandritra izany fotoana izany, ny efitrano famehezana dia misy fitaovana valizy fanalefahana. Aorian'ny fanombohana ny paompy dia azo esorina ny rivotra ao amin'ny efitrano famehezana hiarovana ny tombo-kase mekanika.
3. Ny paompy dia manana rafitra mitsangana, izay mitana faritra kely iray; Ny impeller dia napetraka mivantana eo amin'ny vatan'ny motera, tsy misy ny tsikombakomba, ny paompy dia manana habe fohy amin'ny ankapobeny, rafitra tsotra, mora tazonina; Fifanarahana mitondra antonony, cantilever mpanentana fohy, rafitra fifandanjana hery axial ambony, ataovy azo itokisana kokoa ny fitondra sy ny tombo-kase mekanika, ary milamina tsara ny paompy, kely ny tabataba.
4. Ny paompy dia napetraka ao amin'ny efitranon'ny paompy maina mba hikolokoloana mora.
5. Araka ny filan'ny mpampiasa, dia azo ampiasana amin'ny kabinetra fanaraha-maso herinaratra sy switch switch float, izay tsy vitan'ny mifehy ny fanombohana sy ny fijanonan'ny paompy raha ny fiovan'ny haavon'ny rano, tsy misy fanaraha-maso manokana , fa miantoka ihany koa ny fandidiana azo antoka sy azo antoka an'ny motera, izay tena mety ampiasaina.
Teo aloha: Paompy famonoana afo XBD
Manaraka: Paompy azo alentika ao anaty rano
Kisary fananganana paompy mitsangana mitsangana
Tabilao sy famaritana ny paompy maloto mitsangana